Shiinaha Sandblast Muraayadaha Kuul 120 # Soo saar iyo Warshad | OLAN
Sandblast Glass kuul 120 #
Kuusha muraayadda sandblasting oo leh astaamaha culeyska farsamooyinka qaarkood, xoogga, iyo xasilloonida kiimikada ee xoogga leh. Waxaa laga soo saaray soodhada lime silica galaas waxaana loo isticmaali karaa sida walxaha qarxa si looga saaro noocyo badan oo cilladaha dusha ka mid ah, oo ay ku jiraan nadiifinta biraha, dhammaystirka dusha sare, xoqidda, xoqidda. Waxay hoos u dhigeysaa aragtida wixii waxyeelo ah ee soo gaara, xagashada, cilladaha yar yar ee alxanka ka dib, shiidi, ama barta alxanka waxayna sare u qaadeysaa caabbinta daxalka iyo ka caawinta kordhinta xirashada awoodda.
Qarxinta dhalada kuleylka ah kuma haboona kaliya daaweynta ugu dambeysa ee shey cusub ama daaweyn ka hor geedi socodka kiimikada ee soo socda (koronto-fiiqista, anodic oxidation), waxay sidoo kale u neefsataa nolol cusub walxaha da'da ah, ha ahaato qaybaha mootada, farshaxanka iyo walxaha qurxinta ama qalabka gudaha.
Ku-dhex-dhuumashada Muraayadaha Muraayadaha ee cadaadiska lagu hayo ayaa ilaalin doonta alaabooyinka iyada oo aan isbeddel cabbir ah lahayn, aan lahayn faddarayn iyo iyada oo aan culeys la saarin. Waxay soo saartaa dhammeystir nadiif ah dusha sare ee biraha. Waxyaabaha caadiga ah ee lagu qarxiyo sida Aluminium oksaydh, ciid, birta toogashada waxay ka tagi doonaan Filim Kiimiko ah dusha sare ee qarxay ama waxay leeyihiin ficil goyn. Muraayadaha muraayadaha guud ahaan way ka yaryihiin oo ka fudud yihiin warbaahinta kale waxaana loo isticmaali karaa in lagu caddeeyo raadiyeyaasha fiiqan ee dunta iyo qaybaha jilicsan ee looga baahan yahay xoogaa aad u hooseeya. Is rasaaseynta leh Muraayadaha Muraayadaha ayaa gebi ahaanba u diyaarinaysa dusha sare ee birta nooc kasta oo daahan ah oo ku yaal sida rinjiyeynta, dhaldhalaalka dhaldhalaalka ama dahaarka dhalada. Faa'iidooyinka dheeraadka ah ee qarxinta kuusha dhalada waxaa ka mid ah inaad u isticmaali kartid xoogaa wareegyo ah ka hor inta aysan nadiifin dusha sare. Waa wax caadi u ah in warbaahinta kuusha quraaradu ay socoto 4 - 6 wareeg ah kahor inta aan loo baahnayn in la beddelo. Ugu dambeyntiina, kuul muraayadaha ayaa loo isticmaali karaa qashin nuugista ama qashinka qarxa. Tani waxay ka dhigeysaa mid isku mid ah waxayna kaa caawin kartaa inaad bixiso qashin nadiifinta warbaahinta kaas oo ka dhigaya qarashkaaga qarashka inuu hoos u dhaco.
Muraayadaha Muraayadaha loo isticmaalo sida walxaha qarxa waxaa ku jira astaamaha hufnaanta, adkaanta iyo adkaanta. Waxay ku habboon yihiin nadiifinta iyo nadiifinta nabarrada iyo wasakhda dusha sare ee dusha sare si maqaallada la farsameeyay ay u leeyihiin dhammaad wanaagsan oo ay u dheereeyaan noloshooda adeeg. Dib-u-warshadaynta waxay ka dhigeysaa xulasho dhaqaale. Dabeecadda kiimikada ee muraayadda muraayaddu waa mid aan firfircooneyn oo aan sun lahayn, inta lagu guda jiro isticmaalka, ma jiraan bir ama walxo kale oo waxyeello leh oo ku sii jira dusha sare ee qalabka shaqada, mana saameyn doonto waxyeello deegaanka ku hareeraysan. Wareegga dusha sare ee jilicsan ayaa ka dhigaya waxyeello xoq ah oo ku saabsan saxnaanta farsamada ee qalabka shaqada inta lagu gudajiro geeddi-socodka sandblasting. Hal codsi oo gaar ah oo loogu talagalay qarxinta dhalada muraayadaha waa xoqidda, taas oo ka caawisa birta inay si fiican uga hortagto daalka iyo dildilaaca daxalka walaaca. Hal daraasad ayaa lagu ogaaday inay kordhin karto xoogga daalka qiyaastii 17.14%. Waxay ku siinaysaa dhammaystir wanaagsan oo satin ah iyadoo la kordhinayo adkeysiga alaabta.
Faahfaahinta waxyaabaha Main for sandblasting sida ay miiska soo socda:
Maya Dhexroor (um) Cabbirka shaandhada u dhiganta
Waxaad dooran kartaa kuusha dhalada cabbirka kaladuwan ee u dhexeeya 45um-850um iyadoo loo eegayo shaqooyinka kala duwan.
Qalabka Kuleylka Xoogga Sare (loogu talagalay Blast)
Hawo la cadaadiyey oo ah awood aan toos ahayn, sheygan waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu rusheeyo kuul xawaare sare iyo cadaadis dusha sare ee qalabka shaqada si loo xoqdo loona nadiifiyo.
Ujeeddooyinka kale ee alaabooyinka waa sida soo socota:
1. Nadiifi wasakhda kaladuwan ee waxyeelada foojarka, been abuurka, dhalada, cinjirka iyo balaastigga, tuurista birta iyo xoqida.
2. Ka takhalus walbahaarka kacsan, kordhinta nolosha daalka iyo xoojinta u adkeysiga u adkeysiga daxalka. Tusaale ahaan, turbo matoorka diyaaradaha, vane, usheeda dhexe, gawaarida hoostiisa, ilo kala duwan iyo gears, iwm.
3. Nadiifi oo ka saar cirridka jeexjeexa iyo burka saxanka wareegga iyo transistors-ka geminate ee caagga ka sameysan ka hor inta aan la iibin stannum
4. Ka qaad jirida bistoolada iyo silsiladda oo waxaad siisaa dusha dhalaalka iyo badh la'aanta qalabka farsamada caafimaadka iyo qaybaha baabuurta.
5. Elektromotarka nadiifka ah iyo qaybaha sida loop, burushka korontada iyo rotor-ka inta lagu jiro dayactirka culus
6. Nadiifi oo ka saar burka tuubada birta ah iyo si dhalaalaysa u dhalaaliya biraha aan birta ahayn. U isticmaal in la jajabiyo xoojinta iyo nadiifinta qaybaha mashiinnada dharka.
Muraayadaha Xoogga Xoogga Sare ee loogu talagalay qarxinta
Nooca Mesh Cabbirka Badarka μ m
Hore: Sandblast Glass kuul 150 #
Xiga: Sandblast Glass kuul 100 #
Muraayadda Bead Sandblasting Media
Dhalooyinka Muraayadaha ah ee loogu talagalay Nadiifinta Nalalka
Muraayadaha Muraayadaha Ujeeddooyinka Ciida
Muraayadaha Muraayadda Sandblasting
Waxyaalaha Muraayadda Muraayadaha
Muraayadaha Koofiyadaha Kuleylka Qalabka
Muraayadaha quraaradaha ee loo adeegsaday Mashiinka Sandblasting
Muraayadaha 'Microspheres For Sandblasting'
Adag 6-7 Mohs Sandblasting Glass Kuul
Kuusha Sandblast Muraayadaha
Warshadda Sandblasting Kuul In Shiinaha
Sandblast Glass kuul 180 #
Aluminium Aluminium Dahaarka Dhalada ah (1.93nd)
Shiidi Muraayadaha Muraayadaha 0.8-1.0mm